Xilna Damaq Nimuu Dhibo.
Home QORMOOYIN Xilna Damaq Nimuu Dhibo.
W/Q: Jamaal Macalin.
Allaa mahad leh, nebigeenii suubanaa ee Muxamed (N.N.K.H) baa sharafle.
Waxaan u mahacelinayaa masuuliyiinta sar-sare wasaaradda warfaafinta Somaliland, oo ii gartay xilka tifaftiraha guud ee wakaaladda warararka Somaliland ee SOLNA.
Sidoo kale waxa iyana mahad mudan madaxda waaxda wakaaladda wararka SOLNA iyo hawl-wadeemadeeda, oo iyana gacan mugle ku lahaa garashada xilkaas.
Mudaneyaal waxaad dumadayda saarteen 07/03/2021 xil culus, oo gudashadiisu u baahan tahay dulqaad iyo daacadnimo iyo deganaansho.
Waad ku mahadsantihiin inaad ii garateen masuiliyadaa, iguna tuhun teen inaan qayb ka noqon karo dar-dar gelinta shaqada wasaaraddaasi qaranka u hayso, oo 11-kii sanno ee u dambeeyay aan xadhiga wadaanta ka hayay heer ka hooseeya ka aan hadda ka ciidamin doono.
Waxaan qabaa in qofku masuuliyadda loo garto uu sunti karo guulo wax ku ool ah, sidaa awgeed xilkaasi wuxuu igu kor-dhinayaa culays iyo masuuliyad dheeraad ah, taas oo haddii aanan gacan wada shaqayneed ka helin cid kasta oo uu quseeyo ay adkaanayso in guul laga soo hooyaa, sidaa awgeed waxaan u baahanahay taladiina, tilmaantiina iyo toosintiinaba.
Waxa kale oo ammaan mudan cid kasta oo xilkaas iigu ducaysay, igu bogaadisay ama u aragta inaan ahay mid ku haboon qabshadiisa, waxaan idin leeyahay dhammaantiin Alle ha idin sharfo, karaamaad iga mudan tihiin, guuleysta labada daaroodba (If iyo aakhiro).
Ugu dambayn waxa iga go’an inaan xilkaas ku wajaho, kuna shaqeeyo dadaal iyo daacadnimo, xilkaasna maalinteeda aan wareejiyo annoo halkay hawli-taagnayd haba yaraatee wax uun ku kordhiyay idamka Alle.
Jamaal C/raxmaan Macalin.
Tifaftiraha guud ee wakaaladda wararka Somaliland ee SOLNA.
Previous articleAnnual Constitutional Address of The President of the Republic of Somaliland
Next articleXisbiga Waddani oo soo jeediyay dhisamaha Ciidanka Cirka Somaliland